Semalt: साइटबाट सबै लिंकहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ? यी शक्तिशाली Chrome विस्तारहरू प्रयोग गर्नुहोस्
गुगल क्रोम एक्सटेन्सन जाभास्क्रिप्ट, CSS, र HTML जस्ता वेब प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर लेखिएको हो, र क्रोम वेब स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यहाँ सयौंदेखि हजारौं गुगल क्रोम एक्सटेन्सनहरू छन् जुन तपाईंलाई बहु कार्यहरू सम्पन्न गर्न अनुमति दिँदछ र प्रयोगकर्ता-मैत्री हो। यदि तपाईं एक साईटबाट सबै लिंकहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं निम्न अनुप्रयोगहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
१. uSelect आईडाउनलोड:
USelect iDownload को साथ, तपाईं कुनै पनि समयमा वेबसाइटबाट सबै लिंकहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक इन्टरनेट मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा राम्रो क्रोम विस्तार हो। तपाईंले लि click्कहरू हाइलाइट गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं यसको क्लिक-एन्ड-ड्र्याग विकल्प मार्फत डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, यो वस्तु डिसेलेक्ट गर्नुहोस् जुन तपाईं लक्षित गर्न चाहानु हुन्न र इन्टर थिच्नुहोस् तपाईंको कार्य पूरा गर्न। यो क्रोम वेब स्टोरमा तत्काल डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ।
२. ब्याच लिंक डाउनलोडर:
तपाईं यस क्रोम एक्सटेन्सन क्वालिटीमा सम्झौता नगरी सबै लिंकहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याच लि Download्क डाउनलोडरले तपाईंलाई साइटबाट पोडकास्टहरू, पीडीएफहरू र अन्य फाइलहरू गुच्छा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं डाटालाई तपाईंको हार्ड ड्राइभमा केही क्लिकहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यस गुगल क्रोम एक्स्टेन्सनको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये यो एक यो हो कि यो सबै अपरेटिंग प्रणालीहरूसँग उपयुक्त छ।
Ch. Chrono डाउनलोड प्रबन्धक:
Chrono डाउनलोड प्रबन्धक वेबमास्टरहरू, सामग्री लेखक, विकासकर्ता, वेब डिजाइनर र ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि प्राथमिक विकल्प हो। यसले तपाईंलाई इच्छित लिंकहरू र वेब पृष्ठहरू प्रबन्ध गर्न वा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ र तत्काल पहुँचको लागि क्रोम वेब स्टोरमा उपलब्ध छ। योसँग प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेस छ र तपाईंको लिंकलाई पूर्व-परिभाषित फाइलमा प्रतिलिपि गर्दछ। तपाईं यो एक्स्टेन्सन प्रयोग गरेर बहु साइटहरूबाट लि ext्कहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ र यसको टुलबार बटनहरू, कन्टेक्स्ट मेनूहरू, र कुञ्जी सर्टकटको विस्तृत श्रृंखलाबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा पहिले, Chrono डाउनलोड प्रबन्धकले तपाइँका छविहरू, अडियो फाइलहरू, भिडियो फाइलहरू, र लिंकहरू पत्ता लगाउँदछ। अर्को चरणमा, यसले तपाईंलाई नियमित अभिव्यक्तिको माध्यमबाट यूआरएलहरू फिल्टर गर्न अनुमति दिनेछ।
सबै डाउनलोड गर्नुहोस्:
डाउनटामेअल्ल, DTa को रूपमा पनि परिचित, Chrono डाउनलोड प्रबन्धक, ब्याच लिंक डाउनलोडर, र uSelect आईडाउनलोडको लागि एक राम्रो विकल्प हो। यदि तपाईं माथि उल्लेख गरिएको क्रोम एक्स्टेन्सनको प्रदर्शनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्न डाउनफेस एएल सबै प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक शक्तिशाली र प्रयोग-गर्न-सजिलो सेवा हो जुन तपाईंको वेब ब्राउजरमा उन्नत क्षमताहरू थप गर्दछ र तपाईंलाई कुनै वेब पृष्ठबाट बहु लिंकहरू कुनै समय बिना नै स्क्र्याप गर्न अनुमति दिँदछ। डाउनटामेल सबैले एक उन्नत एक्सिलरेटर सुविधा प्रदान गर्दछ जुन गतिलाई %००% सम्म बढाउँदछ र तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकता अनुसार कार्य रोक्न वा पुनः सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। यो सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूको साथ उपयुक्त छ र तपाईंलाई गतिशील वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
यी सबै गुगल क्रोम एक्सटेन्सनहरू इन्टरनेटबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गरिन्छ र उद्यम, साना र ठूला व्यवसायका लागि उपयुक्त हुन्छन्। तिनीहरू डाटा एक्स्ट्रक्टरहरू (जस्तै Import.io र Kimono ल्याबहरू भन्दा) भन्दा राम्रो छन् र तपाईंलाई आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ कुनै समय बिना। यी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नको लागि तपाईंले प्रोग्रामिंग भाषाहरू सिक्नुपर्दैन र गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।